İlimtepe Yolu Yenileniyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး41 KocaeliIlimtepe လမ်းကိုပြုပြင်မွမ်းမံလျက်ရှိသည်
21 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 41 Kocaeli, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
Kocaeli မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး၊ ပြည်သူလူထုအနေဖြင့်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများကိုပိုမိုအဆင်ပြေစွာသွားလာနိုင်ရန်အစဉ်မပြတ်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ Körfezခရိုင်ရှိHacı Osman နှင့်İlimtepeခရိုင်များကြားတွင် Nihal Atsız Caddesi နှင့် Alparslan Boulevard တို့သည်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းကိုဆောင်ရွက်နေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်သိပ္ပံရေးရာ ဦး စီးဌာန Nihal Atsız Caddesi နှင့်4ထောင်ပေါင်း 200 မီတာလမ်းပြန်လည်ပြုပြင်ရေးလမ်းများရှိ Alparslan Boulevard လမ်းများဖြစ်သည်။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးသည်မြို့လယ်ခေါင်သာမကဘဲကျေးလက်လမ်းများကိုပါခေတ်မီ။ အဆင်ပြေစေရန်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသည်။ ဤအခြေအနေတွင်Hacı Osman နှင့်İlimtepe Nihal Atsızလမ်းနှင့် Alparslan Boulevard တို့အကြားလမ်းသည်အသစ်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။2တစ်ထောင် 800 -3တစ်ထောင် 300 ထောင်သင်းအဖွဲ့များမှဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောအလုပ်၏မီတာ၊ 500 တစ်ထောင်4တန်ချိန် PMT နှင့် 500 ထောင်ပေါင်းထောင်ပေါင်း2တန်ချိန် gravule အခြေပြု 200 ထောင်6တန်ချိန်အခြေခံအောက်ခံပစ္စည်းများ။
Metropolitan အဖွဲ့များသည်သူတို့၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကိုအထူးနည်းလမ်းဖြင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး 500 တန် asphalt ခင်းခြင်းကိုဤ 900 မီတာအပိုင်းသို့ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖောင်ဒေးရှင်းခွဲများနှင့်ကတ္တရာများအပြင်လမ်းအချို့၏အစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးချဲ့ရန်လည်းလုပ်ဆောင်နေသည်။ ပင်လယ်ကွေ့မြူနီစီပယ်အဖွဲ့များသည်မက်ထရိုပိုလစ်တန်မြူနီစီပယ်မှပြုလုပ်သောဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်းကူညီပေးနေသည်။
တစ်ဦးလိုင်စင်မဲ့ကျောက်မိုင်းဖို့လမ်းİlimtep 05 / 06 / 2013 Ilimtepe လမ်းမပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသောကျောက်မီးသွေးအမြန်ရထားရထားစီမံကိန်း၏နယ်ပယ်အတွင်း Ilimtepe လမ်းမကြီးတွင်ဖွင့်လှစ်သောကျောက်မိုင်းသည်နေထိုင်သူများနှင့်မော်တော်ယာဉ်ပိုင်ရှင်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သုတေသနနှင့်စီမံကိန်းအတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ ((Andon Ilıcasıပွိုင့်လမ်းမ) Ayr- (Rize-Tetovo လမ်းမကြီး) Ayr လမ်းမကြီး) ဖြစ်လိမ့်မည် 07 / 08 / 2014 မြေတိုင်းနှင့်စီမံကိန်းအကြံပေးခြင်းလုပ်ငန်းကိုအဝေးပြေးလမ်းစီမံကိန်းနှင့်စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဦး စီးဌာန၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနသည်အခြားအထူးဘတ်ဂျက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ (Andon Ilici Touristic Road) Ayr- (Rize-Kalkandere Road) ကိုရယူလိမ့်မည်။
Bursalılarအာရုံစူးစိုက်မှု, Uludag လမ်းမကြီးလန်းဆန်းနေသည် 29 / 06 / 2014 ဒေသခံများအဘို့အသတိထားပါ! အူလဒူလမ်းကိုပြန်လည်ပြုပြင်နေသည်။ မက်ထရိုပိုလီတန်မြူနီစီပယ်မှပြန်လည်သက်တမ်းတိုးထားသောကေဘယ်ကြိုးပြီးနောက်ကားဖြင့်လမ်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုအဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး 14 ။ Uludağလမ်းမပေါ်တွင်ကတ္တစပြင်ဆင်မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်နှစ် 18 ၏ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန။
İldem-Beyazşehirဟာလန်းဆန်းနှင့်အတူရထားလိုင်းİldemလမ်းကြောင်းကို | Kayseri 11 / 06 / 2013 ldldem-Beyazşehirမီးရထားစနစ်လိုင်းသည် Ildem Kayseri မြို့တော်စည်ပင်နှင့်အတူ Ildem-Beyazşehirမီးရထားစနစ်လိုင်းကိုနှစ်ဖက်စလုံးတွင်လမ်းဖောက်လုပ်နေပြီဖြစ်သည်။ İldemနှင့်Beyazşehir…
Metrobus လန်းဆန်းကတ္တရာလမ်း 23 / 07 / 2015 Metrobüs yolu asfaltı yenileniyor :İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), seyir konforunun artırılması ve daha rahat sürüş sağlanması için metrobüs asfaltını değiştiriyor. Dört aşamada gerçekleşecek yenileme çalışmaları 26 Temmuz Pazar gecesi saat…
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သုတေသနနှင့်စီမံကိန်းအတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများ ((Andon Ilıcasıပွိုင့်လမ်းမ) Ayr- (Rize-Tetovo လမ်းမကြီး) Ayr လမ်းမကြီး) ဖြစ်လိမ့်မည်
Bursalılarအာရုံစူးစိုက်မှု, Uludag လမ်းမကြီးလန်းဆန်းနေသည်
İldem-Beyazşehirဟာလန်းဆန်းနှင့်အတူရထားလိုင်းİldemလမ်းကြောင်းကို | Kayseri
Uludag လမ်းမကြီးပြန်လည်ဆန်းသစ် (ဓာတ်ပုံပြခန်း)
Elmali လမ်းမကြီးပြန်လည်ဆန်းသစ်အတွက် Armutlu
Ring ကိုလမ်းမနှင့်အတူ Sakarya ဝန်ပြန်လည်ဆန်းသစ်လူငယ်များသို့